Imodium प्लस - अनुप्रयोगको सुविधाहरू
Imodium प्लस chewable ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ। यसको मुख्य घटक को हो loperamide hydrochloride र simethicone। यो प्रभावकारी antidiarrheal दबाइ छ। यो हटाउन मदत गर्छ , पखाला को लक्षण लडाई flatulence, स्पास्टिक दुखाइ मद्दत गर्छ र पेट बेचैनी समाप्त।
Imodium: दबाइ को विवरण
दबाइ को भाग हो जो Loperamide, propulsive motility को निषेध, पानी र electrolytes को resorption बढ्छ र यो वृद्धि कम किनकी, आंत्र ट्रान्जिट बढ्छ छ जीवाणु कक्षहरू। पनि घटक antisecretory प्रभाव छ भन्नुभयो। यो मलाशय र गुदा स्फिन्क्टर को टोन, त्यहाँ intercellular permeability एक बहाली छ बढ्छ। Loperamide immunoglobulins को जठरांत्रिय पर्चा को लुमेन बाट हट्न कम गर्न मद्दत गर्छ र पेट मा खकार को गठन नियन्त्रण गर्दछ।
पनि "Imodium प्लस" उत्पादन को भाग हो जो Simethicone, defoaming र carminative कार्य छ। यसको गुण कारण, यो आन्द्रा देखि आफ्नो तीव्र हटाउने योगदान जो ग्याँस बुलबुले को तनाव, कम गर्न मद्दत गर्छ।
भने दबाइ एक केन्द्र अभिनय दबाइ छैन। को नैदानिक सेटिंग मा आफ्नो परीक्षण समयमा सिनर्जी simethicone र loperamide सेट गरिएको छ।
भने तयारी कुनै पनि कारण देखि पखाला को उपस्थिति, साथै भन्नुभयो रोग को कुनै पनि पनि सम्बद्ध लक्षण मा सिफारिस गरिएको छ। यो सुनिंनु, cramping हुन सक्छ दुखाइ, पेट बेचैनी।
औषधिको खुराक "Imodium प्लस"
दबाइ 12 वर्ष र वयस्क देखि लिएर, बच्चाहरु को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक ट्याब्लेट - तरल मल को उपस्थिति मा पहिलो दुई पाटी, र पछि प्राप्त भएको छ।2दिन भन्दा कुनै थप - राति तपाईं एक पाठ्यक्रम अवधि लिन सक्दैन चार भन्दा बढी ट्याब्लेटको। वृद्ध मानिसहरू लागूपदार्थ को नै औषधिको खुराक सिफारिस गरिएको। को अन्तस्करणले काम अनियमितताहरु उपस्थिति दबाइ "Imodium" को माथि-उल्लेख खुराक को कमी आवश्यक छैन।
सम्भव साइड इफेक्ट
एलर्जी प्रतिक्रिया को उद्भव धेरै दुर्लभ छन्। तिनीहरूले छाला rashes वा कर्कश को रूप मा व्यक्त गर्न सकिन्छ। दुर्लभ अवस्थामा हुन्छ anaphylactic आघात। को घटना विषाक्त एपिडर्मल necrolysis यदि दुवै अन्य औषधि एक एलर्जी प्रतिक्रिया सक्छ कि लिइरहेका छन् सामान्यतया सम्भव।
त्यहाँ सुनिंनु, र कब्जियत छन्। तपाईं स्वागत मोड उल्लङ्घन भने, दुर्लभ अवस्थामा र paralytic ileus सक्छ।
यस्तो पेट दुखाइ, सुक्खा मुख, वाकवाकी, थकान, पेट बेचैनी, उल्टी, चक्कर आना र निदाउरोपनको र पाउनदेखि संभवतः रूपमा लक्षण को उपस्थिति अर्थ "Imodium प्लस"।
औषधि "Imodium" को प्रयोग गर्न Contraindications
यस दबाइ निम्न अवस्थामा प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छैन:
- उपस्थिति मा pseudomembranous संबंधी बृहदांत्रशोथ को एंटीबायोटिक उपचार कारण छ जो;
- तीव्र ulcerative संबंधी बृहदांत्रशोथ को उपस्थिति मा;
- जहाँ बालबालिकाको उमेर 12 भन्दा कम वर्ष छ अवस्थामा;
- व्यक्ति कि माथि भने दबाइ बनाउन घटक एउटा घृणाको छ भने।
दबाइ तीव्र पखाला को अवस्थामा mototerapii रूपमा "Imodium" को लागि सिफारिस गरिएको एक रोगी रक्तपातपूर्ण मल र ज्वरो भन्छन् गर्दा।
धेरै ध्यान दिएर, तपाईं कलेजो रोग भएका मानिसहरूलाई यस दबाइ लिनुपर्छ। Imodium को उपचार साथ पुनर्जलीकरण र causal उपचार बाहिर हुनुपर्छ मा।
भने, दुई दिन भित्र दबाइ को सुधार बाट आयो, यो त्याग्न र चिकित्सा सल्लाह खोज्न आवश्यक छ। यो भने कब्जियत वा सुनिंनु थियो, Imodium लिएर रोक्न आवश्यक पनि छ।
"Uniderm": प्रयोगको लागि निर्देशन। "Uniderm" छोराछोरीलाई लागि: समीक्षा
"Pentaxim" औषधि एजेन्ट। समीक्षा, सङ्केत गर्छ, contraindications
'Menopace' जटिल। निर्देशन र संरचना
दबाइ "Milistan": प्रयोग, वर्णन, प्रजाति संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
जटिल के हो? सुविधाहरु के के हुन्?
Samsa लागि आटा - उन्नत विकल्प
बच्चाहरु मा निमोनिया को कारण, यसको उपस्थिति को संकेत
Pronsk Reservoir वर्णन, मत्स्य पालन
बतख - नस्ल, रूस मा व्यापक
दायाँ ovary apoplexy: नैदानिक तस्वीर, गराउँछ र उपचार को तरिका
को "फलाम घोडा" परिवर्तन तरिका गर्न - मोटरसाइकिल मा एयर ब्रस
फक्स बनियान - एक महिलाको दराज मा एक स्टाइलिश र फैशन कुरा